I-Realme inyathela kumhlaba wamaTshayina: kungekudala izokwandisa iihorizons zayo nangakumbi | I-Androidsis
I-Realme inyathela kumhlaba waseTshayina: kungekudala izokwandisa iihorizons zayo nangakumbi
Realme yenza i-dut yayo kunyaka ophelileyo njenge-sub-brand ye-Oppo. Nangona kunjalo, kwiinyanga nje ezimbalwa, inkampani yahlula iindlela kunye nenkampani yabazali bayo u-Oppo ukuze ibe uphawu oluzimeleyo, njengaye Redmi. Ukusukela ngoko, ijolise kwimakethi yaseIndiya, njengoko injalo ukusukela oko yaqalwa, kodwa ikwandisile ukubakho kwayo nakweminye imimandla.
Ngaphandle koko, iRealme iye yahlala kude nentengiso enkulu ye-smartphone, eyi China. Kodwa loo nto sele iza kutshintsha, njengoko kubonakala ngathi inkampani ikulungele ukungena kwimakethi yaseTshayina. Ngapha koko, iphepha lemveliso likaWeibo laye laphila.
Iphepha leReme's Weibo alivezi kwanto ngesicwangciso sayo e ChinaKodwa inyani yokuba sele iphila ibonisa ukuba ukwaziswa kweRealme kwelona lizwe linabantu abaninzi sele kumbovu ukuba kwenzeke kungekudala. Inkampani kulindeleke ukuba ingene kwimakethi yakuMbindi Mpuma kunye naseYurophu kamva kulo nyaka.
Okwangoku, uphawu lweRealme lunobukho kumazwe asixhenxe, kubandakanya iIndiya, iVietnam, iMalaysia, iIndonesia, iThailand, iJiphutha kunye neePhilippines. Nangona kunjalo, iRealme iqalile ukubandakanya iTshayina kwiwebhusayithi yayo, nakwiTaiwan.
Enkosi kwirejista yayo yee-smartphones, uye waphumelela ngendlela engazange ibonwe ngaphambili e-India. Kunyaka omnye wokuphehlelelwa kwayo, inkampani iphumelele i-8% yesabelo sentengiso kwii-smartphones apho.
Ngelixa isekude kakhulu kukhuphiswano lwayo oluphambili iRedmi eIndiya, I-Realme ikhule ngokukhawuleza njengomenzi weselfowuni kunye nezixhobo zayo eziya nazo zisisisongelo esikhulu kumgca weXiaomi's Redmi kwilizwe elikhulu.
I-Realme C2: Uluhlu lwenqanaba elitsha lokungena
Okokugqibela, nangona inkampani ingakhange iqinisekise nantoni na ngokusemthethweni, kubonakala ngathi el Realme 3 Pro inokuba phakathi kwee-smartphones zokuqala ezikhoyo e-China xa uphawu lubhengeza ngokusesikweni ukungena kwalo kuloo mmandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme inyathela kumhlaba waseTshayina: kungekudala izokwandisa iihorizons zayo nangakumbi
I-smartwatch kaMichael Kors Sofie ihlaziywa kunye nophuculo olulindelekileyo
I-Meizu 16s sele iyinyani. Sikuxelela zonke iinkcukacha